प्रदेश राजधानीको चलखेलमा एमालेले आफ्नै रोल्पाली नेत्रीलाई समानुपातिकबाट यसरि चिप्ल्यायो « Postpati – News For All
प्रदेश राजधानीको चलखेलमा एमालेले आफ्नै रोल्पाली नेत्रीलाई समानुपातिकबाट यसरि चिप्ल्यायो
नेकपा एमाले जिल्ला सदस्य तथा अनेमसंघ रोल्पाकी अध्यक्ष ‘ईश्वरी जीएम’ पार्टी भित्र र बाहिर रोल्पामा परिचित नाम हो । माओबादीको लालकिल्ला मानिने रोल्पामा एमाले पार्टीबाट लोकप्रिय बनेकी रोल्पाली ईश्वरी जीएम एमालेको समानुपातिक कोठाबाट एक नम्बर लिस्टमा पर्ने कुरामा पार्टी भित्र भन्दा बाहिर अझ धेरै चर्चामा हुने गर्थ्यो ।
तर तिनै रोल्पाली जुझारु नेत्री ईश्वरी जीएमलाई अन्ततः समानुपातिक सभासदहुनबाट एमाले पार्टीले नै चिप्ल्यायो ।
नेपाली राजनीतिमा पार्टीको नीति र सिद्धान्त भन्दा कुनै व्यक्ति बिशेषको स्वार्थमा नीति डाइभर्ट हुनुले कार्यकर्ता त चिप्लिन्छन नै तर पार्टी नै धरापमा पार्ने गरेका इतिहासहरु थुप्रै छन् । पार्टी नेतृत्व चैन देखि राज्य सन्चालनका निकायहरुमा आफ्नै कार्यकर्ताहरुलाई मनोनित गर्ने सवालमा नेत्रित्वलाई पुज्नु पर्ने, तिब्र चलखेलमा चल्नु पर्ने, दाउपेज घुसपैठमा खेल्नु पर्ने र नैतिकता बेचेर च्याप्लुसी गर्नु पर्ने संस्कार हरेक पार्टीमा देखिन्छ । त्यसकै परिणाम आज एमालेको समानुपातिक कोटाबाट चिप्लिएकि रोल्पाली युवा नेत्री इश्वरी जीएमलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
ईश्वरी घर्ति मगरले केहि कमजोरी गरिन, जस्तै नेतालाई नपुज्नु, चलखेलमा भाग नलिनु, दाउपेज घुसपैठमा नखेल्नु, च्याप्लुसी नगर्नु र इमान्दारी राजनीति गर्न आफ्नो गाउँ नछोड्नु उनको कमजोरी हो । नेपाली राजनीति गर्नेहरुले कित इमान्दारितालाई भुल्नु पर्थ्यो ? कित आफन्तहरु ठुलै नेता हुनु पर्थ्यो ? अथवा राजनीति गर्न बेलैमा राजधानी पस्नु पर्थ्यो ।
नत्र समानुपातिकबाट चिप्लिनु स्वाभाविक कै थियो । ईश्वरी जीएम चिप्लिनुको पहिलो कारण यहि हो ।
दोश्रो कारण, एमालेका उपसचिव तथा ५ नम्बर प्रदेश ईन्चार्ज बिष्णु पौडेल नै कारक तत्व हुन् । अहिले प्रदेश सभाको राजधानी निर्माणमा नेताहरु दाउपेचको राजनीति खेल्दै छन्, त्यहि राजनीतिमा बिष्णु पौडेल मरिमेटी लागेका छन् । प्रदेश राजधानी तोक्ने बिषयमा प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई हुन्छ । प्रदेशसभाले दुई तिहाई बहुमतका आधारमा प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय लिन सक्छ, त्यसकारण उक्त चलखेलको चपेटामा इश्वरी जीएम परिन ।
हो यहि प्रदेश सभामा दुई तिहाई सभासद जुटाउने खेलोमा लागेका बिष्णु पौडेलेले ईश्वरी जीएमलाई चिप्ल्याएका हुन्, यसमा कुनै दुई मत छैन । सायद पाँच नम्बर प्रदेशमा एमाले भित्र समानुपातिक सभासदका लागि किनबेचको खेल्यो भएन होला भन्न सकिन्न।
यहि सन्दर्भलाइ एमाले पार्टीले निर्बाचन आयोगको कमजोरी हो, भन्दै बहानामा थामथुम पार्न खोज्दै छ । यो झन् ठुलो वाहियात हो । आफ्नो होनाहार कार्यकर्तालाई कथित निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सभासदबाट चिप्ल्याउदा के हेरेर बसेको छ ?
‘निर्वाचन आयोगको उम्मेदवार छनौट गर्ने विधिको बुँदा ४१ को(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै समावेशी समूहको उम्मेदवारको नाम छनौट गर्दा त्यस्तो समूहको माथिल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको नाम छनौट नगरी तल्लो क्रममा भएका उम्मेदवारको नाम छनौट गर्न पाइने छैन’ भनेर लेखिएको छ । यस्तो हुँदा हुँदै यदि निर्बाचन आयोगको मनोमानी हो भने एमाले मुख दर्शक बन्नु देशकै ठुलो हात्ती पार्टीकै बेज्जत हो ।
नत्र पार्टीकै जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाटै बधाई थापिसकेर समानुपातिकबाट चिप्लिनुमा दालमा कुचकाल पक्कै भएको छ ।
हेर्नुहोस अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित इश्वरी जीएमको आफ्नै बिचार यस्तो छ:-